गड्यौला दिन नसक्दा हटाइएँ | Bishow Nath Kharel
मेरोबारेमा छानबिन गर्न एउटा समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन दिएछ। त्यसमा ‘ठोस नतिजा आउने काम नभएको’ भन्ने उल्लेख छ रे। मलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई निकाल्ने निर्णय भयो। म स्थापित हुँ, किन बिस्थापित हुने बित्थामा?
प्रधानमन्त्रीले त्यति माया गरेर र विशेष पहलकदमी गरेर लगेको मान्छे, निकाल्नुपर्नेसम्मको अवस्थाचाहिँ कसरी आयो?
यसका केही कारण छन्। पहिलो- मेरो छोरा फिनल्याण्डमा पढ्दैछ। ऊ अकस्मात बिरामी भएको खबर आयो। म त्यसतर्फ जानुपर्ने भयो। यो कुरा थाहा पाएपछि द्वारिकाज होटलकी साहू अम्बिकाकी छोरी सङ्गीताले बोलाउनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो कि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का त्यहाँको कम्पनीले पाएको छ। नेपालबाट एउटा टोली गएर उनीहरुसँग भेटेर ‘ओके’ गरेपछि मात्र उनीहरु काम गर्न आउँछन्। अहिलेसम्म कोही गएको छैन। तपाईंहरुले नै त्यसका लागि पनि पहल गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। खर्च सबै सोही कम्पनीले बेहोर्छ।
के हुनु, ठूला योजना ल्यायो भने हिसिला आफैं रिसाउने। अनि यस्ता योजना नल्याउ भन्ने। कुनै योजना लग्यो कि ‘खालि बल्छी हाल्ने, गड्यौंला नहाल्ने’ भन्थे उनीहरु। के गड्यौंला हाल्ने, खान्छ कि खाँदैन भन्यो भने गड्यौंला हालेर त हेर्नुस् भन्थे। मेरो ९ महिनाको पूरै अवधि यस्तै गड्यौंला विवादमा बित्यो। खाली अरबौंको काम भइरहेको छ, केही गर्नुपर्यो भनेर टोकसिरहने, काम भएको छ त मेरो अन्तर्गत भएको हो र? मेरै अन्तर्गत भए पनि म केही गर्न सक्दिन भनें। उनीहरु झन् रिसाउँथे।
तपाईं प्रधानमन्त्रीबाहेक अरुलाई रिपोर्टिङ गर्दिन भनेर नियुक्त भएको मान्छे। किन हिसिला र जानुकालाई रिपोर्टिङ गर्न जानुहुन्थ्यो त? यही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई किन भन्नुभएन?
बोलाउँथे। फेरि श्रीमतीको कुरा श्रीमान्लाई के भन्नु जस्तो लाग्यो।
अर्को सार्वजनिक गर्नैपर्ने कुरा पनि छ- ‘मिडिल इष्ट’तिर काम गर्ने जन्मजय ढकाल भन्ने एक जना छन्। उनका श्रीमतीमध्ये एउटी हाल काभ्रेकी एसपी गीता उप्रेती पनि हुन। जन्मजय र गीताबीच सम्पत्ति झगडा छ। एकदिन कुरैकुरामा मेरो साथीले ब्यापारका क्रममा जन्मजयलाई ७० लाख दिन बाँकी रहेको प्रसङ्ग आयो। गीता, हिसिला र जानुका राम्रो हिमचिम भएका मानिस रहेछन्। त्यसपछि हिसिलाले जन्मजयलाई तिर्नुपर्ने ७० लाख गीतालाई दिलाइदिन भनिन्। मैले यो मेरो वसको कुरा होइन भनेपछि जसरी पनि दिलाइदिनुपर्छ भनेर जबर्जस्ती कुरा गरिन्। त्यो मैले सक्ने कुरा थिएन, यसबाट पनि उनी मसँग एकदमै रिसाइन्। अदालतले समेत उनीहरुको झगडामा एकले अर्कोलाई केही दिनु नपर्ने फैसला गरिसक्यो, तर पनि हिसिला मलाई जसरी पनि दिलाइदेउ भनेर दबाब दिएको दियै। मलाई निकाल्ने वातावरण यसरी तयार हुँदै गयो र अन्ततः निकालियो पनि।
अनि प्रचण्डकी श्रीमती र तपाईंकी श्रीमती पनि मितिनी…?
हेर्नूस्, हिसिला भौतिक योजना मन्त्री भएका बेला बाबुरामले फोन गरेर तिनलाई मन्त्रालयको काममा सघाइदिनुपर्योन भन्नुभयो। ल न त जानेको सघाइदिउँ भनेर गएँ पनि। एक दिन वाइसिएलको नेता सागर आएर …हाम्री दिदीसँग किन आएको, यहाँ के काम छ, गइहाल’ भनेर थर्काए। कुटौंलाझैं गरे। यो सबै दृश्य देख्दा पनि हिसिलाले खासै केही भनिनन् सागरलाई। यो कुरा बाबुरामलाई भनें। उहाँले बालाजुमा हाम्रो विस्तारित बैठक हुँदैछ, त्यसपछि पार्टीमा मेरो पकड बलियो हुन्छ, अनि म तपाईंलाई पूरा प्रोटेक्सन गरौंला भन्नुभयो। अब यस्तो अवस्था छ, त्यही भएर कसलाई के भन्ने। कहिले को बलियो भएर सुरक्षित हुनुअघि नै मारिएँ भने के गर्ने भनेर उनीहरुको सङ्गत नै छाडिदिएँ। त्यहाँमाथि पनि मेरो झन् धेरै समय भयो मितसँगै भेटघाट नभएको।
मान्छेहरु केशव स्थापित हावादारी हो भन्छन् नि? कहिले च्छो-रोल्पाको पानी मिनरल वाटर बनाएर सिङ्गापुर लैजाने कुरा गर्छ, कहिले टुँडिखेलमुनि भूमिगत पार्किङ बनाउने कुरा गर्छ, यस्तै गफमात्र दिन्छ भन्छन् त?
हो, यसबारेमा ममाथि धेरै नै प्रहार हुने गरेका छन्। तर मैले भनेका सबै कुरा साँचो हुन् र गर्न पनि सकिन्छ। यो नबुझ्नेले मात्र मलाई गफाडी भनेका हुन।
अन्तर्वार्ता भिडियोमा हेर्नुस्-